on-line Insimbi steel - China Langzhi zokushisela Izinsiza kusebenza
Uhlolojikelele Lesi simiso ganged nge umshini ipayipi wokwenza. Kungashiwo ifaniswe izinhlobo eziningi ukumisa kuncike kudingekile. P-T: Ukuze shot isibhakela, i-plasma ziyokwamukelwa ngenxa bottoming igcwale ukwenza umphetho Welding ukuba ngomunye umugqa isilinganiso ngqo (One Shot kungaba idlule 8mm noma bellowing ipuleti ukujiya). Ukuze Inhlamvu yesibili, argon arc Welding umshini izosetshenziselwa silungisa ukwenza surface bushelelezi ngaphandle sidewall Undercut .. T + P-T: shot Okokuqala kuyinto Preheat nge argon arc Welding, s ...
Lesi simiso ganged nepayipi ukwenza umshini. Kungashiwo ifaniswe izinhlobo eziningi ukumisa kuncike kudingekile.
P-T: Ukuze shot isibhakela, i-plasma ziyokwamukelwa ngenxa bottoming igcwale ukwenza umphetho Welding ukuba ngomunye umugqa isilinganiso ngqo (One Shot kungaba idlule 8mm noma bellowing ipuleti ukujiya). Ukuze Inhlamvu yesibili, argon arc Welding umshini izosetshenziselwa silungisa ukwenza surface bushelelezi ngaphandle sidewall Undercut ..
T + P-T: shot Okokuqala kuyinto Preheat nge argon arc Welding, Inhlamvu yesibili ukusebenzisa plasma igcwale Welding futhi shot lwesithathu ukulungisa ngokusebenzisa argon arc Welding, noma ukufaka etholakalayo Welding-wire ukwenza zangaphandle Welding umphetho module ebusweni amahle . Lolu hlelo kufanelekile 1.8mm-12mm ukujiya SS ipayipi bumbela umugqa.
T T T: Ngokwamukela umuthi-negative isigxobo Welding ubuchwepheshe, usethe 3 Welding ibala Welding bumbela umugqa, isivinini Welding kuzokwenziwa ngcono nge-calories kuyenzeka ihlangane. Inhlamvu yokuqala kufanele arc jika umsebenzi, ayengakwazi khona ukususa ngempumelelo uwoyela zamanyala nezokungalungi kwaba pre-ukushisa umsebenzi-ucezu. Thumela shot kwabashiselayo igcwale futhi shot yesithathu ukulungisa. Lokhu kungaba ukugwema ngempumelelo okubangela kuhlangana / Pore / isihlabathi-imbobo njll It is kabanzi usded phakathi Welding ngoba Ukudla- sanitary grade tube / ukushisa-exchange tube / epholisayo tube futhi Ti Tube
zokushisela zamanje 0-500A
isivinini zokushisela 0-3000mm / iminithi
Welding ukujiya 2-12mm
Previous: jointed ibhodi Welding
Ingxubevange Steel zokushisela
Duplex Steel zokushisela
Engagqwali Pipe zokushisela Izinsiza kusebenza